शेयर बजारले एतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ । साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक र खरिदविक्री रकम दुवैमा अहिले सम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । गत विहीबार १ हजार ८ सय ९३ दशमलव २४ अंकमा पुग...
काठमाडौं : शेयर बजारले फेरि नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक र खरिदविक्री रकम दुवैमा अहिलेसम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। गत बिहीबार १ हजार ८ सय ९३ दशमलव २४ अं...
२०७७ मङ्सिर १४ आइतबार १६:०४:०० सेयर बजारले फेरीपनि ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ । साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक र खरिदविक्री रकम दुवैमा अहिले सम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । गत वि...
काठमाडौं । शेयर बजारले फेरीपनि एतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ । साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक र खरिदविक्री रकम दुवैमा अहिले सम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । गत विहीबार १ हजार ८ सय ९३ ...
emountaintv.com . २ महीना अघि
काठमाडौं, १४ मंसिर । शेयर बजारले फेरीपनि एतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ । साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक र खरिदविक्री रकम दुवैमा अहिले सम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । गत विहीबार १ हजार...
शेयर बजारमा ऐतिहासिक कीर्तिमान
काठमाडौं । शेयर बजारले फेरि पनि ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ । साताको पहिलो दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक र खरिदविक्री रकम दुवैमा अहिले सम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ ।गत विहीबार १ हजार ८ सय ९३...
janaaastha.com . २ महीना अघि
शेयर बजारले फेरिपनि एतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ । साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक र खरिदविक्री रकम दुवैमा अहिले सम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । गत विहीबार १ हजार ८ सय ९३ दशमलव २४ अंक...
सेयर बजारले फेरिपनि ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ । साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक र खरिद बिक्री रकम दुवैमा अहिले सम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । गत विहीबार १ हजार ८ सय ९३ दशमलव २४...
विशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्य १०% ले घट्यो मंसिर १४, काठमाडौं । पछिल्लो समय शेयर बजारमा कारोबार रकमले उचाई लिने क्रम जारी छ । आइतवार हालसम्मकै उच्च रकमको शेयर कारोबार भएको छ । यो दिन रू. ९ अर्ब २...
शेयर बजारमा ऐतिहासिक कीर्तिमान, आज मात्रै ९ अर्ब २२ करोडको कारोबार
सञ्चार संवाददाता ४२ मिनेट पहिले काठमाडौँ-शेयर बजारले फेरीपनि एतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक र खरिदविक्री रकम दुवैमा अहिले सम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम भएको ...
​​​​​​​शेयर बजारमा एतिहासिक कीर्तिमान, अहिले सम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम